Agent manazava, Agent nokleary hampitomboana ny fihenjanana - BGT
8 maraina30 AM-17: 00 PM
Additives amin'ny Recycle Plastika
ARAHABAINA NY orinasantsika
Tianjin Best Gain Science & Technology Co., Ltd. (China BGT) dia orinasa indostrialy sy varotra izay mirotsaka amin'ny famokarana sy fanondranana simika teknolojia avo lenta. Shina BGT dia natsangana tamin'ny taona 2000. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny mpanazava isan-karazany, ny mpiorina hafa ary ny additives ho an'ny plastika fanodinana izay naondrana tany amin'ny firenena maro any Azia atsimo atsinanana, afovoany atsinanana ary eropa efa ho 20 taona teo ho eo izay tsara ary kalitao milamina.
Hijery misimisy kokoa Mifandraisa aminay
ny seho fanadihadiana
Ny mpanazava dia azo ampiasaina amin'ny fanatsarana ny fahazavana sy ny fitomboan'ny hafanana fanoherana ny polypropylene amin'ny alàlan'ny famokarana polymer. Izany koa dia mitarika amin'ny fanamafisana ny ampahany miorina ary amin'ny fotoana fohy kokoa mandritra ny fizarana. Ity karazana vokatra ity amin'ny forme formale toy izany dia nankatoavin'ny FDA azo ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny sakafo eo amin'ny tsena manerantany.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana Agent Nucleating, maro ny toetra mampiavaka ny vokatra azo hatsaraina, ao anatin'izany ny fiorenan'ny fitaovana, manome tanjaka amin'ny fihenjanana, ny tanjaky ny fiatraikany, ny fihenan'ny modular, ny mari-pana amin'ny fanodinana hafanana, ny fitoniana. Izy io koa dia azo antoka fa manatsara ny fampisehoana optika sy mekanika ny vokatra. Vovoka fotsy tsy misy poizina izy io ary tsy misy fofona.
Ny Transparent Master Batch dia mety amin'ny resin kristaly tsy feno an'ny PP & PE sns. Mety hanatsara ny mangarahara sy ny fahadiovan'ny vokatra, ny tanjaka, ny hamafin'ny hafanana, ny hafanana sy ny haben'ny toetr'andro, hampihena ny tsingerin'ny famolavolana. Izy io dia ampiharina indrindra amin'ny fanovana ny vokatra plastika plastika PP sy ny fanamboarana ny sary mihetsika PE, transmittance maivana ho an'ny hazavana, ohatra ny sakafo, fitaovana fanosotra tarehy, fitoera-pitsaboana sns.
Ny vokatray dia miantoka kalitao
Agent momba ny nokleary PET
Nucleator mahery vaika
Ny vokatray dia aondrana any amin'ny firenena maro any Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient ary Eropa.
Ny vokatra BGT dia vokatra teknolojia avo lenta, misy famaritana avo, tsy misy poizina, tsy misy dikany.
Isaky ny manana teknisianina matihanina hamaly ny fanontanianao izahay.
Ny vokatray dia be mpampiasa Ny vaovao farany
Agent Agent Nucleating Transparent i Dibenzylidene Sorbitol
Dibenzylidene sorbitol Transparent Nucleating Agent dia azo zaraina ho karazany telo. Ny taranaka voalohany dia DBS. Ity vokatra ity dia manana hafanana ambany sy tsy misy fatrany aldehyde matanjaka. Mandritra izany fotoana izany, noho ny fihenan'ny lelany ambany ...
Inona no atao hoe Agent Nucleating Transparent
Ny mpiorina nokleary mangarahara dia azo zaraina ho karazany roa: fitambarana organika sy fitambarana tsy mihombo. Ireo mpandraharaha niokleary tsy an-jorom-borona dia oksida metaly indrindra, toy ny talc, silica, dioxide titanium, asidra benzoic sns ...
Ny fampandrosoana ny Polypropylene
Noho ny fanoherana ny hafanana avo, ny hery misintona mazava, ny fanodinana sy ny famolavolana mora, ny fanodinana mora ary ny vidiny ambany, polypropylene dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny simika, fibre simika, fitaovana ao an-trano, fonosana, indostrian'ny hazavana ary indostria hafa. Howe ...
Ahenao ny zavona ary manatsara ny mangarahara amin'ny polypropylene
Ny mpanazava dia azo ampiasaina amin'ny fampihenana ny setroka ary hanatsara ny hazavan'ny polypropylene amin'ny alàlan'ny famolavolana ny polymer. Izany koa dia mitarika amin'ny fanamafisana ny ampahany miorina ary amin'ny fotoana fohy kokoa mandritra ny fizarana ....
Miandry anao any Shenzhen 2021!
Chinaplas dia iray amin'ireo fampisehoana tsara indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny akora vita amin'ny fingotra sy plastika izay tena sarobidy amin'ny mpitsidika sy ny fampiratiana rehetra ao. Tamin'ny taon-dasa, nandritra ny fampirantiana, dia nijanona ho hafanam-po fatratra ho an'ny tsirairay ny tsirairay ...
TIANJIN FAMPIANARANA MAIMAIMPOANA SY TEKNOLOGIANA CO., LTD
B603 United Building, No.51 Youyibei Road, Hexi District, Tianjin, Sina.